ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ကချင်တွေ ဘာလို့ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်လဲ
KIO ဟာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် တောက်လျှောက် ညီလာခံတက်ခဲ့တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးအတွက် အကျုံးဝင်မယ့် ဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ် အချက် ၁၉ ချက် ကိုလည်း တင်ပြခဲ့တယ် (KIO 19 Points Proposal: http://www.ibiblio.org/obl/docs4/KIO_proposal.pdf) ။ သို့သော် မှတ်တမ်းတင်ထားပေးမယ် ဆိုတာနဲ့ပဲ ဖယ်ထားခံခဲ့ရတဲ့အပြင် မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူးက “တောင်ပေါ်ကို ပြန်ကန်ထုတ်ခံရမယ်” လို့တောင် ခြိမ်းခြောက်လိုက်တယ် ဆိုပဲ (Burma at Crossroads: http://www.encburma.net/index.php/polocy-papers/37-policypapers/108-lian-h-sakhong-burma-at-crossroads.pdf) ။ KIO ခေါင်းဆောင်တွေဟာ ဗမာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တွေ့တိုင်း ကြုံရင် ကြုံသလို တမျိုး၊ တရားဝင်နည်းလမ်းက တဖုံ၊ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ ကချင်လူမျိုးများရဲ့ အခန်းကဏ္ဍအကြောင်း ပြောတိုင်း ကျနော်တို့က စစ်သား၊ နောင်တက်လာမယ့် အရပ်သားအစိုးရနဲ့ နိုင်ငံရေးစကား ပြောကြပါ လို့ပဲ စကားလွှဲတတ်ကျတယ်တဲ့လေ။ ဒီတော့ ယောက်ျားစကားပဲ၊ တက်လာမယ့် အစိုးရလွှတ်တော်မှာ ပါဝင်နိုင်ရေး ကြိုးစားတဲ့အနေနဲ့ KSPP (Kachin State Progressive Party: http://www.mizzima.com/political-pro/new-parties/kspp.html) မှာ KIO ခေါင်းဆောင်တချို့ မိခင်အဖွဲ့အစည်းက တရားဝင် နုတ်ထွက်ပြီး ပါတီဝင်တယ်။ အဲဒီပါတီက မှတ်ပုံတင်ကျမလာ (http://burmapartnership.org/2010elections/2010/09/ec-rejects-individual-kachin-candidates/) ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အစိုးရဖွဲ့ရင်တော့ တခုခုတော့ ထူးခြားမှာပဲဆိုပြီး တက်လာတဲ့ အစိုးရနဲ့ နိုင်ငံရေးစကားပြောဖို့ KIO စောင့်နေရင်းနဲ့ပဲ အခုလို ထိုးစစ်ဆင်တာ ခံလိုက်ရတာပါပဲ။
သို့သော် ၂၀၁၁ ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့မှာတော့ ဗျူဟာမှူးကိုယ်တိုင် KIA ထိန်းချုပ်နယ်မြေထဲ ရေအားလျှပ်စစ်လုပ်ငန်းခွင် ခဏ၀င်ကြည့်မယ် အကြောင်းပြပြီး ခွင့်တောင်းဝင်တယ်။ ပြီးတော့ ပြန်မထွက်တော့ဘူး။ အဲဒီအကွက်ကို KIA ဗိုလ်ချုပ်ဂမ်ရှောင်က ကလေးအကွက်လို့ နာမည်တပ်ပေးလိုက်တယ်တဲ့။ အဲ့ထဲကနေကို ကွပ်ကဲပြီးတော့ KIA ကို စတိုက်တော့တာပဲ။ နောက်တော့ သူလည်း တင်ပါးနဲ့ ခြေဖနောင့် တသားတည်း ပြေးပါလေရော။ ပြီးတော့ KIA ဆက်ဆံရေးရုံးဝန်ထမ်းကို ဖမ်း၊ စစ်သုံ့ပန်းလဲလှယ်မယ်ဆိုတော့ ရစရာမရှိအောင် နှိပ်စက်ပြီး အသေကောင်ပြန်ပေး ... သူတို့ရဲ့ သုံ့ပန်းကျတော့ မှဲ့တစက်မစွန်း ပြန်ပေးတယ် (သတင်းဖတ်ရန် http://www.mizzima.com/special/kachin-battle-report/5406-burmese-government-not-following-international-policy-on-captives.html) ။ ပြီးတော့ အနီးအနားရှိတဲ့ ရွာတွေကို ဒုက္ခ စ ပေးတော့တာပဲ။ အခုလိုင်ဇာမှာ ခိုလုံနေတဲ့ ဒုက္ခသည် အများပိုင်း အစိုးရထိန်းချုပ်နယ်ဘက်က ပြေးလာတဲ့ လူတွေချည်းပဲ။ (Crimes in Northern Burma: http://partnersworld.org/usa/images/stories/crimes_in_northern_burma/crimes_in_northern_burma.pdf) (Burma: Committing Abuses in Kachin State: http://www.law.yale.edu/Burma.Army_Committing_Abuses_in_Kachin_State.pdf) (Burma: Untold Miseries: http://www.hrw.org/features/burma-untold-miseries).
ယဉ်ကျေးမှု စော်ကားခံရ၊ ကချင်တွေမှာ Family name (Htinggaw Mying) ရှိတာကို မကြားဖူးဘူး၊ ရှုပ်တယ်ဆိုပြီး မှတ်ပုံတင်မှာ မထည့်ပေးဘူး။ နိုင်ငံခြားရောက်မှ Family name က အရေးကြီးမှန်း သိလာရ။ ကချင်ပြည်နယ်က တခုတည်းသော မနောပွဲ တနှစ်နေမှ တခါပဲ ကျင်းပခွင့်ရတဲ့ ကချင်ပြည်နယ်နေ့ လုပ်ခွင့်အတွက် နှစ်တိုင်း အဆင့်ဆင့် စာတင်ရတယ်။ ပွဲရက်မှာ အစိုးရရုံး၊ ကျောင်းမပိတ်ပေးဘူး။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာလည်း ဗန်းမော်က မနောကွင်း အဖျက်ခံရတယ် (သတင်းဖတ်ရန် : http://bnionline.net/index.php/news/kng/7411-burmese-military-authorities-hamper-preparations-for-kachin-festival.html) ။ မြန်မာစကား မတတ်လို့ ဆိုပြီး အဆဲခံရ၊ အလုပ်လျှောက်လွှာမှာ ကချင်၊ခရစ်ယာန်ဆိုရင် ဘေးဖယ်၊ လက်မခံ၊ ကချင်တွေ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရွေးထားတဲ့ အမတ်က ၀န်ကြီးဖြစ်မလာဘဲ ဦးနုက ကောက်တော်မူတဲ့ တယောက် ၀န်ကြီးတက်ဖြစ် (ကချင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီးဟောင်း ဒူဝါဇန်ထဆင်ရဲ့ “ဒီမိုကရေစီ ပြောင်းပြန်” ဖတ်ရန် https://docs.google.com/open?id=1poXW3tZMe6CTJ6uV35xCn0VAFUiyduKI8Bn3Xhl1tQM_70E7UXt1Hj8hIVxO) ။ ကချင်တွေပိုင်တဲ့နယ် ဖီမော်၊ ကော်လန် ကန်ဖန် ဒေသကို ဦးနုက ကချင်လူမျိုးတွေ ကန့်ကွက်နေတဲ့ကြားက တရုတ်ကို ပေးလိုက်တယ်။ မကျေနပ်တဲ့ ကျောင်းသားတွေ ဦးနုကို တွေ့ပြီးပြောတော့ “ငါ--ိုးမသား ခွေးကောင်တွေ အားလုံး ဖမ်းချုပ်လိုက်မယ်” ဆိုပြီး မဖွယ်မရာ ဆက်ဆံတယ် (သွားတွေ့ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားများ ကိုယ်တိုင်ပြောစကား)။ ခရစ်ယာန်ဆိုရင် ရာထူးမတက် (တက္ကသိုလ် အတူတက်တုန်းက ပူတာအိုမှာ ရထားရုံပိုင် အလိုရှိတယ်လို့ ပြောင်နှောက်တာကို ယုံတဲ့ ဗမာ ငတုံးကျတော့ မြို့နယ်မှုးတွေ တက်ဖြစ်) ... အမျိုးမျိုးသော ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုများကို မခံနိုင်လို့ကို လက်နက်ကိုင်လာတာ ...။
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 2:04 AM
GRAI HKRAK SAI.N DAI ZAWN NGA AI LAIKA NI HPE MYEN SAWA MYU NI A BLOG KAW LAW LAW KA BANG RA AI.BAI KA MARA NA HPE GRAI MADI SHADAW AI.
ကချင်ပိုင်နယ်တွေကို တရုတ်ကိုပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းသေချာသိချင်ပါတယ်..ဖြေပေးပါ..
အော်ငို ဒုက္ခသည် တွေကိုအကြောင်းပြ၊ရယ်ဘို့ကောင်းလိုက်တာကေအိုင်အေရယ်
Pyi Soe said...
Ha ha ha,KIA! U r so funny and lozzey!
မြန်မာအစိုးရနဲ့လောလောဆယ်ငြိမ်းချမ်းရေးယူထားကြတဲ့အဖွဲ့တွေ့ရဲ့အခြေနေကိုကြည့်ပြီး ကချင်တွေလည်း မြန်မာအစိုးရရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုကြောက်တာမဆန်းပါဘူး
ခရစ်ယာန်ဆိုတာမင်းတို့ဘိုးအေတွေကသိမ်းသွင်း သွားလို့မင်းတို့ခရစ်ယာန်ဖြစ်ရတာငတုံးတွေရဲ့ မင်းတို့မြန်မာယာဉ်ကျေးမှုဘာသာထုံးတမ်းစဉ်လာ ကြပ်ကြပ်စော်ကားထပ်ဒုက္ဒရောက်မယ်။ မသိရင်Researchတွေပြန်ကြည့် ယေရှု ကဘာလဲ ဘာဘာသာဝင်လဲဆိုတာ။ယေရှုကဗုဒ္ဒဘာသာကွ။ ငတုံးတွေပဲရူးကြတာ။
Gautama Buddha said...
အော်ရယ်... ဘယ် က ငပေါလဲ the Truth ဆိုတဲ့ကောင်.. မင်းက .... တော်ပီကွာ.. မရေးတော့ဘူး... ခွေးရူးနဲ့ရန်ဖြစ်လို့ နိုင်လဲ နာမှာပဲ...
man jokar said...
The Truth, မင်းပြောတော့ မြန်မာယာဉ်ကျေးမှုဘာသာထုံးတမ်းစဉ်လာဆို... ဒါဖြင့် မင်းရေးထားတဲ့ comment က ဘာဖြစ်လို့ ရိုင်းနေရတာလဲ ဒါလောက်ပဲပြောတော့မယ် ငါက မရိုင်းချင်ဘူး အဲဒါကြောင့် .............
(for the truth) သေမှ ငိုမနေ နဲ့
the truth ရဲကစာကို ဖတ်လိုက်ရတော့ သူရဲ့ စင်းစားတွေးခေါ် တဲ့ (IQ) ဟာကလေးသာသာ ပဲ ရှိတယ်ဆိုတာသိလိုက်ရတယ်...
Oak Soe said...
For "the truth", It is so amazing that with this such little thinking and small knowledge how can you type your computer? That you said,'Myanmar Culture and Tradition', How much you know about Myanmar Tradition and Culture or How much you know about Myanmar or Burma from Historical or Anthropological or Religious Point of Views. The Truth, you are so pity and poor guy among Myanmar. Don't forget that if we can check your(Myanmar)DNA, there will be less Myanmar left because most of Mon tribes, some of Kayin, tribes from Tha Nin Thar Yee, and Most of Chin tribes from Middle parts of Myanmar were changed to so called myanmar tribe. It is because of poor minded Myanmar Government since 1940s. You know, at that time, even in Yangon there are less Myanmar but Mon, Kayin, Indian and China are mixed. But now, no more Mon, so where is Mon? And you know, every tribes who belongs to Buddhism they had lost their ethnic identity and their ethnicity. So, they become Myanmar by this kinds of assimilation with politically and religiously. And I want to suggest you that don't write anything on the website if you don't know. If you want to write about Myanmar you must first to learn you Buddhism and then your history of Buddha origin and myanmar origin(not country but tribe). If Myanmar historian U Than Tun is still alive, he will deeply laugh such kind of people, bamars like you, 'the truth', ass brain and knowledge. Even your religion is not Myanmar origin but from India, what you (bamar) called them (ka lar religion). Buddha was an Indian and he separated from Hindu religion. So, the root of Buddhism is Hindu and most of stories and tales, scripts from buddhism are from Hinduism. So, The truth, you really don't know about even your religion. Don't say about other religions, even you don't know yourself. Poor the truth, shameful. Ha Ha Ha Ha Ha. So, Where is bamar origin? There is no Bamar origin. Anaw Ra Htar, Kyan Sit Tharr were also Indians, they are not bamar, ha ha ha. how come ka lar become Myanmar's heros. Ha Ha Ha, So funny.
အပေါ်ကအုပ်စိုးဆိုတဲ့ကောင် မင်းကကော်မင့်ကို အင်္ဂလိပ်
လိုရေးထားတယ်ဆိုတော့ မင်းကိုစာမတတ်တဲ့ကောင် လို့
ညီအကို အချင်းချင်းဖြစ်ကြတဲ့ရန်ပွဲတွေ စစ်ပွဲတွေမဖြစ်စေ
ချင်ပေမယ့် ဘယ်သူမှားတယ် မှန်တယ် မပြောလိုဘူး။
ငါတို့ဟာဘယ်ဖန်ဆင်းရှင်ကိုမှမကိုးကွယ်သလို လူဟာကြိုးစားရင်ဘုရားတောင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့မိမိကိုယ် ကိုအားကိုးတဲ့ဘာသာဖြစ်တယ်။ကိုယ့်အယူဝါဒ ကိုယူ
ဖို့ဘယ်သူကိုမှအတင်းအကျပ် မတိုက်တွန်းသလို ဘာသာ
ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားဟာ ဘုရင့်သားတော် မိခင် ဘခင်
မင်းပြောတဲ့ကုလားပေါ့ကွာ ။ ဒါပေမယ့်လောကမှာအတုမရှိတဲ့ကုလားနော်။နေရာတစ်ကာမှာတွေ့နေရတဲ့ကုလားမဟုတ်ဘူး။ငါဟာ
ဘယ်ဘာသာ ကိုမှ မစော်ကားဘူး တမာန်တော်မိုဟာမက် ယေရှု့ခရစ်တော် တို့ဟာလည်းသူ
i agree to Sein ye din..don't fight each other and just work our own and create beautiful country ..........just put good opinion each others...just take desired religious view..this can be peaceful.Each must have own God to guide the life . but don't look down other religion.Especially our buddhism should obey what the Buddha guide.
i do agree Sein ye din comment. Coz Buddhism should obey what Buddha guide. Some Buddhism are not understand deeply what the Buddha guide. Our Buddha said to be patient to every livings . ..we have to respect other religious people also .Each God guide good way for life to all livings. ...the most important thing is to think good opinion on each others and that make peaceful .i want all Kachin race to peaceful and want they can freely offer Jesus Christ...coz most of my friends Christian are very polite and very kind person because..they follow and obey what their God said to them. We should admire their habit and we also should obey what our Buddha said. ...........thanks .
စစ်အစိုးရရဲ့ မူဝါဒကြောင့် ဒီလိုမညီမျှမှူတွေ ဖြစ်ခဲ့ရတာပါ။ ဒါလူမျိုး စုတစ်စုရဲ့ ပယောဂနဲ့မစိုင်ပါဘူး။
အစိုးရရဲ့ သွေးခွဲတတ်တဲ့မူဝါဒပါ ။ အဲ့ဒီ ဗမာငတုံးတို့
ဘာတို့ဆိုတဲ့ အပြေားတွေ စကားလုံးတွေကို မသုံးတင့်ဘူး ထင်ပါတယ်ခင်ဗျ။
Oak Soeဆိုတဲ့လူရေ တစ်ယောက်ယောက်ကိုသဘောမကျတိုင်းတစ်ခြားသူတွေတစ်ခြားဘာသာဝင်တွေကိုမပုတ်ခက်ပါနဲ့။ငါလဲ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပဲ။ဒါပေမဲ့ငါကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာနဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့ငါသေချာလေ့လာသလို တစ်ခြားဘာသာတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့လဲသဘောပေါက်အောင်လေ့လာပါတယ်။မင်းသေသေချာချာမသိပဲမဝေဖန်ပါနဲ့။ငါဖြတ်သန်းလာတဲ့သက်တမ်းတစ်လျှောက်ဘာသာခြားတော်တော်များများနဲ့ဆုံဖူးတယ်။ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့သိချင်လို့မေးတာရှိသလို၊မဖြစ်စလောက်အသိနဲ့ဝေဖန်ပုတ်ခတ်ချင်တဲ့လူတွေလဲအများကြီးတွေ့ဖူးတယ်။မင်းရဲ့ရေးသားချက်ကလူတစ်ယောက်ရဲ့အမြင်ကိုပြန်လည်ချေပခြင်းထက် လူအများစုကိုပုတ်ခက်ခြင်တဲ့စိတ်ကပိုများနေပါတယ်။မင်းက ဗုဒ္ဓဘာသာကိုပုံပြင်ဆန်တယ်လို့ပြောခြင်ပုံရတယ်။သေသေချာချာလဲလေ့လာပါကွာ။ငါကဗုဒ္ဓဘာသာဆိုပေမယ်လို့ဗုဒ္ဓဝင်ကရေးသားချက်တော်တော်များများကိုချင့်ချိန်ပြီးမှယုံတယ်။သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ်အရေးအသားတွေကိုယုံတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ဘာသာခြားတော်တော်များကလဲဗုဒ္ဓရဲ့ဟောပြောချက်ထက်စာရင်ဗုဒ္ဓဝင်လောက်ဖက်ပြီးဝေဖန်ကြတယ်။နက်နက်နဲနဲမလေ့လာကြဘူး။ဗုဒ္ဓဝင်ဆိုတာဗုဒ္ဓဖြစ်စဉ်ကိုနောက်လူတွေကရေးသားတာဖြစ်တယ်။ဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်ကလွဲပြီးနက်နက်နဲနဲတရားစကားမပါဘူး။ဘယ်ဘာသာမဆိုဒီလိုအရေးအသားမျိုးကပါတာပဲ။ချင့်ချိန်ပြီးမှယုံပါ။နောက်ပြီးတော့စကားပြောရင်လဲချင့်ချိန်ပြီးမှပြောပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေမို့လို့အခွင့်အရေးရတယ်ပြောရအောင်ငါတို့တွေမှတ်ပုံတင်သွားလုပ်လဲအရစ်ခံရတာပဲ။ပိုက်ဆံမပေးမချင်းကတော့မလွယ်ဘူးသာမှတ်။စနစ်ဆိုးအောက်ကနင်းပြားတွေချင်းအတူတူဘယ်သူကလူမျိုးကြီးစိတ်ဝင်နိုင်မလဲ။ကို့မိသားစုစားဝတ်နေရေးကိုပြေလည်အောင်ကြိုးစားနေကြတဲ့လူတွေချည်းပဲ။လူတစ်ယောက်မကောင်းရင်အဲဒီလူကိုပဲဝေဖန်ပါ။မဆိုင်တဲ့လူတွေကိုဆွဲသွင်းပြီးမပုတ်ခတ်ပါနဲ့။
ZAW LIN AUNG said...